Madaxweyne Xasan Sheekh oo Farmaajo ugu yeeray in ay kulmaan | Baydhabo Online
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Farmaajo ugu yeeray in ay kulmaan
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa markii ugu horeysay Murashax Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ka codsaday in ay wada kulmaan.
Wakiilo ka socotay dhinaca Madaxweynaha Somaliya, ayaa Isniintii waxaa ay Hotel Jazeera kula kulmeen wakiilo kale oo meteleysay Maxamed C/laahi Maxamed, Ra’iisal Wasaarihii hore ee Somaliya.
Wakiilada Farmaajo, ayaa soo dhaweeyay codsiga ka soo yeeray Madaxweynaha Somaliya, isla-markaana uu Farmaajo diyaar u yahay in uu la kulmo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Ilo wareedyo, ayaa sheegay in labada wakiilo ay isla garteen in kulan kale isugu yimaadan maalmaha ina soo aadan, si ay u muddeeyan goorta ay kulmi karayan Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Murashax Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo).
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo, ayaa xaqiijiyay in Shariif Sheekh Axmed uu damacsan yahay in uu abuuro isbahaysi xoogan, isla-markaana awood u yeelan kara in meesha uu ka saaro rajada Madaxweyne Xasan Sheekh, ee ah in markale uu talada dalka ku soo laabto.
markacadeey.com, ayaa ogaatay in Madaxweyne Xasan uu qasdigiisu yahay in taageero uu ka helo Farmaajo, isagoo qorsheynayo in uu u magacaabo Ra’iisal Wasaaraha xigga, haddii markale loo doorto in uu noqdo Madaxweynaha Somaliya.